Wararka Maanta: Arbaco, Mar 21, 2018-Warar dheeraad ah oo ku saabsan iska horimaad ka dhacay Muqdisho
Dadka degmada ayaa sheegay in ay maqlayaan mar marka qaar rasaas culus, wallow hadda xaaladu u muuqato mid degan.
Wararka ayaa sheegaya in iska hor imaadka ay ka qeyb qaadanayaan qoryaha ku rakiban gaadiidka dagaalka, taasoo baqdin weyn ku abuurtay dadka degmada.
IsgoyskaTarbuunka oo ah meel aad u mashquul badan oo ay isticmaalaan gadiidka dadweynaha ayaa xiran, waxaana lagu arkayaan oo kaliya ciidamo aad u hubeysan.
Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay laamaha Amniga dowladda oo ka hadlaya Israsaaseynta laga maqlay degmada Hodan.
Ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay iska horimaadka labada dhinac